Wordpress ရှာဖွေခြင်းကို Google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်အစားထိုးပါ Martech Zone
WordPress ရှာဖွေမှုကို Google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်အစားထိုးပါ
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 15, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ WordPress ရှာဖွေမှုသည်နှေးကွေးပြီးအလွန်တိကျသည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကဂူဂဲလ်ဟာလျင်မြန်ပြီးတိကျမှုရှိတယ်။ ထို့အပြင် Google ၏ Google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်း သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် (သို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုက်) တွင်ထည့်သွင်းရန်ပြောင်းလဲလာသည်။
Permalinks နှင့် Google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်း
ငါကဲ့သို့သော Permalink လင့်ခ်များပါသောဆိုဒ်တစ်ခုအတွက်မူ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုထပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။ URL တစ်ခုလုံးကိုဒိုမိန်းပေးမည့်အစားလုပ်ဆောင်မှုပုံစံကိုဆွေမျိုးများနှင့်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
ဂူဂဲလ်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေမှုတွင်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုသူတို့အသုံးချပြီး၊ သင်နှင့်အညီမိုက်ခရိုဒေတာကို အသုံးပြု၍ ခေါင်းစီးများကိုသင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ပါကပုံရိပ်ဆွဲလိမ့်မည်။ schema.org။ ငါအသုံးချ Yoast WordPress SEO ပလပ်အင် အဲဒါကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ငါ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပို့စ်တခုစီအတွက်အထူးပုံရိပ်တွေနဲ့မွမ်းမံထားတယ်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာ template ကိုလုပ်ပါ
ရှာဖွေမှုရလဒ်များ: [သင်၏ Google Custom Search Results Code ကိုဤတွင်ထည့်ပါ]
ရလဒ်များအတွက်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုထည့်သောအခါယခု template ကိုရွေးချယ်ပါ။
မည်သည့်ဘလော့ဂ်ကိုမျှလုပ်ရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ် - မြန်ဆန်သောတိုးတက်မှုအတွက်သာမကသက်ဆိုင်ရာရလဒ်များအတွက်ပါ။ သငျသညျပင်အဖြစ်ကောင်းစွာဘက်မှာစုံတွဲတစ်တွဲနှစ်ကောင်လုပ်လိမ့်မည်! သင့်ကိုယ်သင်ကြည့်ပြီးရှာဖွေရန်ပုံစံအသစ်ကိုလှည့်ပါ။ မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။
မှတ်စုတစ်ခု - အကယ်လို့မင်းကအဲဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် နှစ်ဆယ့်တစ်အခင်းအကျင်းရှာဖွေမှုနယ်ပယ်စတိုင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေးကြီးသောရှာဖွေမှုနယ်ပယ်တွင် css နှင့်! update လုပ်ရန်လိုသည်။ iframe CSS width ကိုသင့်ရဲ့ style sheet မှာလည်းခဲယဉ်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
Tags: google csegoogle cse wordpress ပါ+ googleအကွောငျးနှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ဆယ့်ခုနစ်wordpress cse ပါ။wordpress google cse
စက်တင်ဘာ 16, 2008 မှာ 12: 59 AM
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင် Google စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေမှု ရှိခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်သည် ရွေးချယ်ခွင့် နှစ်ခုလုံးကို ဖွင့်ထားသည်။